April 2016 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
AKKA DUBBATE KA’EERA. Maat.28:6
April 30, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Icciitiin kun Ol’aanaadha. Umama keessaa guutummaan kan isa beekee fi kan isa xinxaalee(qorate) bira gahu danda’u hin jiru. Icciitiin Waaqummaa isaa afuura qulqulluun Abbootii filatamaniif qofa kan ifu qofa yoo ta’u, akkasumas ta’e guutummaa isaatiin kan isa beekuu danda’u hin jiru. Kanaafi, Abbootiin keenya sammuu namaatiin ol ta’uu isaa fi yoomuu iccitii ta’uu isaa ibsuuf “waaqa garaa Gurraacha” jechuun kan waaqa isaanii waammatan. Waa hundaafuu, Abbootii keenyaa irraa kan baranne akka armaan gadiitti dhiyaateera. Waa’een Du’aa ka’uu Gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos Wangeela Maatiwoos 28, Maarqos 16, Luqaas 24 fi Yohaannis 20 irratti guutummaan barreeffamee kan jiru yoo ta’u akka armaan gadiitti dhiyaateera.
Waa’ee du’aa ka’uu yoo dubbannu haala duutti itti dhufee fi ammam akka nama gaddisiisu hubachuun nurra jiraata. Jireenyis duunis Addamii fi Heewwaniin akka ta’e kitaabni qulqulluun ni dubbata.
Jireenya gara du’aatti kan jijjiires seera Waaqayyoo diiganii cubbuu raawwachuu dha. Du’a jechuun hiika lama kan qabu yoo ta’u gama tokkoon foon lubbuun keessaa baate yoo ta’u gama birootiin immoo otoo lubbuun jiruu fi nama jedhamee waamamu cubbuu raawwachuun otoo ija jijjiirannaa qalbii hin taasifatiin jiraachuu dha.
Du’aa ka’uun (ትንሣኤ) akka hiika mana Kiristaana keenyaatti lubbuu fi foon duuni addaan baase ture walitti deebi’anii murtii fudhachuuf kan itti ka’anii dha. Du’aa ka’uun duuni kan ittiin moo’atamee fi bilisummaan ilmaan namaa kan ittiin labsameedha. Du’a moo’achuun du’aa kaa’uun isa duraa kan ta’ee fi aangoo kana ilmaan namaatiif kan kenne Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosi dha. “Kiristoos warreen muganiif isa duraa ta’ee ka’eera.” Qoronxoos dursaa 15:20.
Addaam waggoota torbaaf ajaja Waaqayyoo eegee waan jiraateef ulfinni isaa otoo hinhir’anne fi kennii isaa otoo jalaa hin hi’rifamne akka jiraate hayyoonni mana amantaa nu barsiisu. Ergaa Yohaannis 1ffaa 3:24 “ajaja isaa kan eegu Isaan jiraata Innis isa keessa ni jiraata”. Addaamii fi Heewaan dhugaan tokko yaadoota walfalleessan lamaan seexanaan waan itti himameef tokkoo isaa filachuun dirqama waan itti ta’eef fedhii isaanii guutuun gorsa seexanaa filatanii raawwatani. Kana raawwachuu isaatiinis akka seexanni jedheen waaqa ta’uu hin dandeenye, akka waaqayyoon itti dubbatee turetti ulfinaa fi kennaa isaanii ni dhaban. Bara keenya kanas, yaada faallaa dubbii Waaqayyoon nutti dubbachaa jiruun ala kan nu gorsaan (yeroo Waaqayyoon gara mana isaatti fayyinaaf nu waamu akka hin deemne, Gocha Waaqayyoon hin raawwatiina jedhe akka raawwanuu, yeroo soomaa akka hin soomne, yeroo kadhannaa akka ciisnuu fi kkf), fi kana biras darbaan Ijoolummaa Waaqayyoo nudhabsiisuuf dhibbaa adda addaa kan nurraan ga’an jiraniin ‘namni biyya lafaa hunda buufatee yoo lubbuu isaatti hir’ise maal godhaaf? Akka Maat.8:36 itti himne seexana diina ta’ee otoo jiruu fira fakkaatee goyyomsuun Waaqa keenya waliin addaan nubaasuuf nu qoraa jiru irraatti qabsaa’uu qabna.
Addam Waaqa isa uumee fi isa jaalatu ajaja/ jecha isaa darbuun cubbuu raawwachuun Waaqa isaa waan gaddisiseef isaa fi ijoolee isaa kan ta’an ilmaan namaa hunda irraatti duuni itti murtaa’e. Waaqayyoo fi Ilmaan namaa gidduutti daddoon(girgiddaa) lolaa ni uumame. Addaam abbaan keenya suuga Waaqayyootiin waantooni isa barbaachisu hundi guutameefi bakka itti jiraatuuf, waan nyaatuu fi uffatu kennameefi yaaddoo fi bu’aa ba’ii malee bakka itt jiraatu Gannata sababa cubbuu isaatiin ni dhabe. Waanti nama dinqu immoo battala ajaja Waaqa isaa darbee cubbuu raawwate ofii isaa Waaqa isaa isa duraan yaaddoon eeguu fi abdii godhatu ni baqate, kennaan Waaqayyoo inni qaama qullaa isaa uffisee ture harkaa badee qullaa ta’u isaanii ni barani. Uum. 2:17 irratti “Mukkeen gannata keessa jiran hunda ni nyaatta.Garuu Ija mukaa gaarii fi hamaa nama beeksiisu kana hin nyaatiin, gaafa isa irraa nyaatte du’a niduuta” akka jedheeni ture bakka Waaqni isaa toolcheefi itti isa jiraachisaa ture, nyaata fi uffata Waaqa isaatiin qophaa’eef dadhabbii tokko malee dhamdhamachaa ture dhabuun du’a akka irraa of eegu itti himaamee ture harkatti ni kufe. Waaqayyoon ija mukaa hin nyaatiin,yoo nyaatte ni duuta jedheen seexanni immoo gaafa isa nyaate waaqa ni taata jechuun akka nyaatu ajaje. Sababa isaatiin dacheen (lafni) ni abaaramte, dhama’ee dafqa isaatiin akka jiraatu, biyyoo irraa uumameetti akka deebi’u, dubartiin yeroo deessu ciniinsuun akka itti cimu, uumamni (seexana boofaan fakkeefame) kan isaaf bitamee jiraachaa ture diina akka itti ta’u itti murtaa’eera. Kana caalaa immoo Waaqa isaa baqachuu fi dhokachuun dhaabiitti/ jiraatti du’eera. Qullaa isaanii ta’uu ni barani, kennaa fedhii isaanii fedhii Waaqayyoof ittiin bulchan ni dhabani, nageenya isaanii ni dhaban, jireenya lubbuu ni dhaban, Waaqqayyoon fakkaachuu ni dhaban, Gannatas ni dhaban. Kana booddees abbootiin jiraatan hundi Addaam abbaa isaanii irraa du’a kana dhaaluun jireenya lubbuu dhabanii, dukkana keessa waggaa 5500 jiraataniiru. Namoonni barren kana keessa turanis jireenya dukkana sukkanneessa kana keessaa akka isaan baasu akka jedhanii kadhachaa turaniiru. Isa. 64:1-2 “Maaloo otoo samiiwwan bantee gadi buutee, tulluuwwanis otoo raafamanii maaloo, akka ibiddi qoraan gubee ibidichis bishaan danfiisu maqaan kee diinoota keetti beeksiisi. Jechuun Waaqa isaanii kadhachaa turaniiru. Akkasumas, Ilmi namaa Uumaa isaa waliin waldhabuu isaatiin bittaa seexanaa sukkanneessa ta’e harkatti kufuu isaa Raajjichi kun akkas jechuun ibseera. “Hundi keenya akka nama xuraa’aa taaneera, qulqullummaan keenya hundi akka uffata abaarsaati, hundi keenya akka baalaa ni harcaane, cubbuun keenyas akka bubbee nufudhateera.” Jechuun dubbateera. Isa. 64:6 .
Kunis, hanga bara dhaloota Gooftaa keenya Iyyaus Kiristoos haadha keenya, giifti keenya durbee Maariyaamii irraa dhalatee waadaa Addamiif ilmoo ilmoo kee irraa dhaladhee nan si fayyisa jedhee galeef raawwatuutti kan ta’ee dha. Ilmaan namaa kana mana hidhaa si’ool keessaa baasuu fi bittaa seexanaa harkaa bilisa baasee ulfinaa isaa duraan turtetti deebisuuf jecha Waaqni nama ta’ee dhalatee, du’aa isaa du’ee, du’aa ka’uun aangoo du’aa ittiin ka’u goonfachiiseera. Addaam hidhaa keessaa baasuuf ni hidhame, ni reebame dhuma irrattis fannifamee jireenya bara baraa ni laateef.
Gooftaa fi Qoricha keenya kan ta’e Iyyasus Kiristoos bakka Addaam itti boqote Gologotaa (hiikni isaa buqqee mataa) jedhamuutti fannifamee du’a ni ajjeese. Aawwaalas humna ni dhoowwe. Fagaanne kan turreenis Ijoolleekoo nuun jedhe. Wangeela Maatiwos 27:33 fi Qoronxos 1ffaa 15:56. Foon isaatiin gara awwaalaa, lubbuu isaatiin gara sii’ool bu’ee Addaamii fi ijoollee isaa abdiin isaa eeggachaa turaniif bilisummaa ni labse. ‘Yaa du’a waraantuun kee meerre? Yaa sii’ool moo’ichi kee meerree? 1Qor.15:55 jedhamee akka barreeffame du’a Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin seexanni “du’a’’ jedhamee dubbatameef aangoon isaa kan fashalaa’ee ta’uu, seexanni uumama dadhabaa ta’uu fi waaqa tolfamaa ta’uu isaa kan agarsiisuu dha.
Du’aa ka’uun gosa lama dha. Inni jalqabaa Ka’umsa Lubbuu (ትንሣኤልቡና) yoo ta’u kunis jijjirrannaa qalbii godhachuun cubbuu irraa fagaatanii qulqullummaan amantiin jiraachuu dha. Namni Waaqayyootti amanee cubbuu irraa fagaachuun Waaqa isaa waliin jiraachuu baachuun du’a dha. Qulqullichi Phaawuloos kana yoo ibsu “Jalaala guddaa nuuf qabu irraa ka’uun yeroo cubbuu keenyaan duunee turre illee Kiristoos waliin jireenya nuuf ni kenne.” Efeson 2:5 jedheera. Qulqulluun Yohaannisis Mul’ata isaa 20:6 irratti “Ka’umsa isa jalqabaatiif kan carraa argate inni eebbifamaa fi qulqulluu dha. Duuni inni boodaa(lammaffaa) jechuun namni jijjirannaa qalbiif ta’u godhachuun Foonii fi Dhiiga Gooftaa fudhatee jireenya bara baraatiif hin qophoofnee fi akka fedha Waaqayyootti jiraachuun fedhii isaanii fedhii Waaqayyootiif hin bichisiifne du’aa ka’uu isa jalqabaa waan hin arganneef du’a isa lammaffaa jalaa bahu kan hin dandeenye ta’uu hubachiiseera. Qulqullichi Paawulosis “Ati inni raftu damaqi, warreen jiraatti du’aan keessaa ka’ii, Kiristoos siif ibsa.” Jedheera. Seenaan mucaa badee wangeela Luqaas 15:11-32 tti barreeffamee arginu du’aa ka’uu isa jalqabaa kan nu barsiisuu dha. “Mucaankoo kun du’ee ture, amma garuu jireenya argateera, badee kan ture argameera” jechuun du’uu isaa kan dubbate du’a foonii otoo hin taane abbaa fi maatii isaa irraa addaan bahuu isaatiin ture. Nutis yeroo Waaqayyo Abbaa keenyaa fi qulqulloota Isaa irraa addaan baanu ni duuna. Battala gara Waaqayyo Abbaa keenyaatti jijjirannaa qalbii godhannee deebine du’aa kaanee jireenya ni arganna. Kiristaanoonni jijjirannaa qalbii godhatanii FOONII FI DHIIGA GOOFTAA FUDHACHUUN akka fedha waaqayyootti jiraachuun ka’umsa isa duraa ni goonfatu. Ka’umsi inni jalqabaa jijjirannaa qalbiitiin argatan kun ka’umsa isa lammaffaatiif kan qaqqabsiisuudha.
Du’aa ka’uun inni lammaffaa immoo warreen du’an ka’anii foonii fi lubbuun isaanii kan itti walitti dee’bii’anii dha (ትንሣኤዘጉባኤ). Kunis kan raawwatamu yeroo Gooftaan keenya lammata deebi’ee dhufu yoo ta’u yeroo kanas qulqulloota warreen ka’umsa isa jalqabaa argataniif yoo murteessu warreen cubbamoota ta’an irratti immoo ni murteessa. Du’aa ka’umsa isa lammaffaa kanaan cubbamoonni du’a isa lammaffaa kan du’an yoo ta’u kunis du’a bara baraati. Warreen Du’aa ka’ii isa jalqabaa argatan garuu du’a isa jalqabaa jechuun addaan ba’uu foonii fi lubbuun ala/ malee duuni inni lammaffaa isaan kan argatuu miti.
Gooftaa fi Fayyisaa keenya kan ta’e Iyyasuus Kiriistoos Du’aa ka’uu isaatiin namni du’ee awwaalamee kan hin hafne, du’aa ka’ee jireenya bara baraa jiraachuuf abdii kan qabu ta’uu isaa du’aa ka’umsa isaatiin nuuf mirkaneesseera. Kanaaf, du’a booddee jireenyi awwaala booddee abdiin ka’uu jiraachuu isaa hubachuun qaroomina guddaa dha. Yoh.5:28-29 “Yeroon warreen du’anii awwaalaman hundi sagalee Isaa itti dhaga’an ni dhufa, warreen waan gaarii hojjetan jireenya argachuuf ni ka’u, warren hammeenya hojjatanis adabiif ni ka’u.” akka jedhame amantii keenya sirrii fi qajeeltuu taate Ortodooksiin cimnee dhaabbannee naamusa gaarii qabaanne mootommaa Waaqayyoo dhaaluun jireenya bara baraa akka argannu hubachuun of-qopheessuun barbaachiisaa dha. Kana ta’uu baatee yoo hammeenya keenyaan itti fufne garuu gara boolla sodaachisaa ta’eetti gatamnee seexana waliin jiraachuun dirqama ta’uun isaas dhimma dagatamuu hin qabnee dha.
Jijjirannaa qalbiitiin otoo gara Waaqayyootti hin dhiyaannee fi gara mana Abbaa keenyaatti hin deebine ayyaana du’aa ka’uu kabajneera jechuun hin danda’amu. Mana keenyaa keessatti waantoonni nyaataamanii fi uffataman yoo guutaman illee lubbuu keenyaatti waanti hir’ate waan jiruuf ayyanichi ayyaana gammachuu guutuu qabuudha jechuun hin danda’amu. Kanaaf, Ayyaana du’aa ka’uu Gooftaa kana yeroo kabajnu gammachuun keenya guutuu ta’ee suga ayyanichaan akka eebifamnutti gara mana Waaqa keenyaatti deebinee hirmaattoota du’aa ka’ii jireenyaa kan nu taasisu hoolaa Qaraaniyootti nuuf qalame FOONII FI DHIIGA GOOFTAA keenyaa fudhachuun ta’uu qaba malee gocha warreen du’a filatanii kan ta’e sirbaa fi machiin ta’uu hinqabu.
Du’a Isaatiin du’a moo’ee du’aa ka’uu uulfinaa kan nuuf laate fayyisaan Adduunyaa Waaqni keenya kan darbe irraa barannee guyyaa du’a keenyaa yaaduun qulqullummaan qophoofne akka jiraanu nu haa gargaaru. Arjoominni Waaqayyoo araarri durbee Maariyaamii hunda keenya waliin haata’u. Ameen.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-04-30 08:03:042018-10-26 09:21:09AKKA DUBBATE KA’EERA. Maat.28:6
April 26, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Torbeen gidiraa sooma guddaa erga raawwannee booddee galgala Hosaa’inaa irraa jalqabanii guyyoota hanga jimaataatti jiran guyyoota gidiramuu gooftaa haala adda ta’een itti yaadannu dha. Kunis kan ibsu rakkina Gooftaan keenya irra gahee kan itti yaadannuu fi itti sagadnuu dha (1Qoro. 11:26) – “Isiniis hanga Gooftaan dhufutti yeroo buddeena kana nyaattanii xoofoo kana dhugdan mara du’a isaa ni labsitu.” Soomii guddaa keessatti galgala gaafa guyyaa Hoosaa’inaa eegalee hanga halkan gaafa du’aa ka’umsaatti guyyoota jiran guyyoota boo’icha, gidiraa, rakkinaa yookaan dhiphinaa jedhama. Guyyaawwan kunis barootni gadadoo (miidhamaa), gidiraa (dhiphina) kan itti yaadatamanidha. Bara gadadoo, gidiraa (dhiphina) jechuun ilmaan namoota garbummaa si’ool, hidhaa seexana jalaatti qabamanii bara jiraachaa turan jechuu dha. Gidiraa yommuu jennu mataa bowwoo, garaa ciniinnaa, dhukkubbii harkaa fi miillaa osoo hin taane fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sanyii ilmaan namoota hundaa hidhaa fi cunqursaa seexanaa jalaa bilisa baasuudhaaf jaalatee eeyyama isaatiin rakkina fannoo nuuf fudhate kan ibsuu dha. Waa’ee Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos rakkina isaa fi du’a isaa kan ibsu (kan yaadachisan) kitaaba gidiraa (kitaaba Himaamaat) kan jedhamu torbee kana keessaa sa’aatii sa’aatii isaarratti dubbifamaa tura. Karaa adda addaatiin waa’een rakkina isa irra gahee ni yaadatama. Yihudootni kan galgala Dilbataa marii isaanii eegalan, guyyaa Roobii mirkana’eef.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-04-26 06:28:382018-10-26 09:21:09Torbee gidiraa
‘’Hosaa’inaa Ilma Daawitiif .” Mat 21: 9
April 22, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-04-22 12:42:532018-10-26 09:21:10‘’Hosaa’inaa Ilma Daawitiif .” Mat 21: 9
April 15, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Dn Zalaalam Daggafaan
Guyyaan kun sooma guuddaa Dilbata isa torbaffaa dha. Moggaasni isaas kan Qulqulluu Yaarediin moggaafame dha. Guyyaa kana hangafni Faariisoota kan tahe galgala gara Gooftaa keenya dhufee yommuu baratu Gooftaanis Icciitii Cuuphaa, Icciitii Lammata Dhalachuu Niqodimoosiin akka barsiise Qulqulluun Yaared wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irra jiru caqasuun kan faarfate waan ta’eef moggaasni guyyaa kanaa Niqoodimoos jedhameera.
Mata-dureen faaruu Qulqulluu Yaarediin ayyaana guyyaa kanaaf kennames “ሖረ ኀቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ” ( Niqoodimoos kan jedhamu gara isaa deeme) isa jedhudha.
Sirna Galatoo guyyaa Niqoodimoos keessatti kutaaleen Kitaaba Qulqulluu armaan gadii ni duubbifamu:-
v Roomee 6፡1-19
v Yoh.1ffaa 4:18-dhum.
v Hojii Ergamoota 5:34-dhum.
v Galatoo: Galatoo Maariyaam
v Misbaakiin guyyicha: Farsaa Daawit 16:3
ሐዉጽከኒ ሌሊት ወፈተንኮ ለልብየ (Halkan na mildhatte lubbuu koos qoratte)
አመከርከኒ ወኢተረክበ አመጻ በላዕሌየ (Na qoratte hammeenyis narratti hin argamne)
ከመ ኢይንብብ አፉየ ግብረ ዕጓለእመሕያዉ (Afaan koo gochaa dhala namaa akka hin dubbanne)
v Wangeelli Qulqulluu guyyicha duubifamu፡ Yohaannis 3:1-20
Akkuma wangeela Yohannis keessatti caqasametti Niqoodimoos icciitii lammata dhalachuu jechuun sirna cuuphaa gooftaa keenya irraa barachuun isaa nama carraa guddaa qabu isa taasisa. Niqoodimoos guyyaa kanaa eegalee ifaan otoo hin ta’in dhoksaan barataa Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos ta’uun baruumsa isaa kan jaalatu fi kan Gooftaa keenya deeggaru ta’uu isaa wangeelli dhugaa ni baha.
Niqoodimoos beekaa fi barsiisaa Yihuudotaa ture (yoh.3:10). Gooftaan keenya Mana Qulqulluummaa keessatti raajii inni godhu arguun lapheen isaa guutuun kan fudhate ture (yoh2:13-23). Niqoodimoos Faariisota sodaachuun akkasumas dura bu’aa Yihudotaa waan ta’eef Yihoodonni kan Gooftaa keenya morman wajjin yoo argame mormuu waan danad’aniif galgala malee guyyaa gara Gooftaa keenyaa deemuu hin danda’u (yoh 3:1). Boodas yommuu Gooftaan keenya fannifamu guyyaa Jimaataa yeroo dukkanaa’u sana Gooftaa keenya awwaaluuf gara Gooftaa keenyaa deemuu isaa ni hubanna.
Guyyaa kanatti Manni Kiristaana keenyaa kan dubbifamuu fi kan faarfatamu hunduu wangeela yohaannis 3:1-12 jiru irratti Niqoodimoos Gooftaa keenyatti amanuu isaa,Gooftaan keenyaas Icciitii torban Mana Kiristaana keenya kessaa tokko kan ta’e Icciitii Cuuphaatiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf bishaanii fi Afuura Qulqulluu irraa dhalachuun dirqama ta’u isaa kan itti barsiise dha.
Yeroo baay’ee yeroo waa’ee Niqoodimoos kaasnu yaada keenya kessatti kan nutti mul’atu wangeela yohaannis boqonnaa sadii irratti kan barreesse dha. Garuu Niqoodimoos kan kanarra darbe seenaa barreeffame kan wangeela Yohaannis 7:45 fi Yohaannis 19:39 qabu dha. Caqasootni sadan wangeela Yohaannis kessatti barreeffaman maalummaa Niqoodimoos sirriitti nu hubachiisu.
Egaa kanarraa ka’uun seenaa Niqoodimoos wangeela irratti barreeffame irraa waan gurguddaa sadii irraa barachuu dandeenya.
1ffaa:Dhugaa barbaaduu:-akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa sadii irratti ibsameen galgala galgala gara Gooftaa deemee barachuu isaa nuu hima. Haa ta’u malee yeroon suni Niqoodimoosiifis ta’e hordoftoota Gooftaa keenyaaf yeroo rakkisaa ture. Yeroo sanatti namni kamiyyuu Kiriistoos wajjiin kan ta’e, kan deeggare tokkummaa Yihudootaa keessas ta’e Mikuraaba (Galma) Yihudootaa keessaa ni hari’atama jedhanii seera baafatanii turan. Niqoodimos garuu hangafa Faarisoota ta’ee otuu jiru waa’ee wangeelaa kan isaa hin gallee waan tureef dhugaa barbaachuuf galgala galgala gara Gooftaa keenya deemuun jireenya dhugaa fi nageenya kan ta’e wangeela dhugaa barata ture. Nuyis yommuu gara Mana qulqullummaa deemnnu waan hunda qabna jechuu otoo hin ta’ini,Waaqayyo biratti hundi keenya guutuu akka hin taane hubannee gara isaa deemuu qabna.
2ffaa :Dhugaaf jiraachuu:-yeroo Yihuudonni maree murtii isaanii irratti Gooftaa keenya irratti akkamitti akka isa fannisan mari’atan sana gidduu isaanii taa’uun “ Seerri keenya afaan isaa irraa utuu hin dhaga’in,waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti ni farachiisaa?” isaaniin jedhe ( Yoh 7:51). Nullee jireenya keenya yeroo yeroon waantotni sobaa nu mudatan sana moo’uudhaan dhugaaf amanamaa taanee jiraachuu qabna.
3ffaa:Dhugaaf dhaabachuu :-yeroo Gooftaan keenya fannifame sana dhugaaf kan dhaabate dha. Akkasumas yeroo dhiphuu kanaa shittoo fi kan itti kafanamu Yoseef wajjin qabatanii gara fannoo Gooftaa keenyaa dhufe dha. Har’allee Manni Kiristaanaa keenyaa yeroo Qiddaasee maqaa isaa kaastee isa yaadatti. Har’as taanaan waa’ee Niqoodimoos yommuu kaasnuu fi Kabajnu jireenyi isaa kan irraa barannuu fi qajeelcha jireenyaa nuu tahuu qabu dha.
Egaa walumaagalatti nuyis akka Niqoodimoos galgala galgala kan barbaannu fi kan fiignu kabajaaf,Aangoo fi wantoota addunyaa kana irra jiraniif otoo hin ta’ini dhugaa barbaannee,ittiin jiraannee fi dhugaan dhaabannee jiraachuun mootummaa waaqayyoo akka dhaalluuf fedhaa fi eeyyama waaqayyoo haa tahu; akkasumas araarsummaan durbee Maariyaamii nuu waliin haa ta’u. Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-04-15 06:19:342018-10-26 09:21:10Niqoodimoos
Tajaajilaa Gaarii (Mat. 25÷14-30)
April 9, 2016 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Dn. Qalamawarq Miidhagsaatiin
Torbeewwan sooma guddichaa keessa inni 6ffaan “Tajaajilaa gaarii” ykn afaan gi’izitiin ‹‹ገብርኄር›› jedhamee beekkama. Torbeen kun manni kiristaanaa keenya waa’ee tajaajilaa afuraawaa jabaattee kan ittiin barsiistu dha.
Faarfannaa sanbata kana faarfatamu irratti qulqullun Yaareed “Tajaajilaan gaariin eenyuu dha?” jedhee gaafata.
Sirna Qiddaasee guyyaa Gebriheer keessatti kutaaleen Kitaaba Qulqulluu
keessaa dubbifaman warren armaan gadii jiranidha:
v 1ffaa ximo 2፡1-17
v 2ffaa phexi 5:1-12
v Hojii Ergamoota 1:6-9
v Misbaakiin guyyicha: Farsaa Daawit 40:10
Hiika: “ Yaa Waaqa koo eeyyama kee dubbachuudhaaf naan fedhe
Seerri kee laphee koo keessatti barraa’ee taa’a;
Waa’ee arjummaa kees himeera.”
Sanbata kana wangeelli dubbifamu akkana jedhaa “ Akka nama daandii deemuuf ka’ee tajaajiltoota isaa waamee qarshii ittiin bu’aa buusan kennee fakkaataatii tokkoon tokkoon isaaniitiifis akka dandeettii isaaniitti isa tokkoof Makliitii (qarshii) shan, isa tokkoof Makliitii (qarshii) lama , isa tokkoof ammoo Makliitii (qarshii) tokko kenneefii deeme.
Inni qarshii shan fudhate sunis deemee daldaalee qarshii shan bu’aa buuse; akkasumas, inni lama fudhate akkasumas daldaalee qarshii lama buufate; inni qarshii tokko fudhate garuu deemee lafa soqe( qonforee) warqee (qarshii) Gooftaa isaa awwaale.
Gooftaan isaaniis deebi’ee isaan to’ate ; inni qarshii (Makliitii) shan fudhate sun dhiyaatee yaa Gooftaa qarshii ( Makliitii) shan natti kennitee turte anis bu’ee ba’ee daldaaleen qarshii (Makliitii) shan buuseeraatii kunoo makliitiin kee jedhee Makliitii shan itti kenne.Gooftaan isaas ati tajaajilaa gariidha; wanna xiqqoo irratti amanamteettaatii wanna Guddaa irrattan si muuda gara gammachuu Gooftaa keetti seeni jedheen.
Inni Makliitii ( Qarshii) lama fudhates dhiyaatee yaa Gooftaa qarshii lama natti kennitee turte; kunoo bu’ee baheen qarshii lama buuseera jedheen. Gooftaan isaas ati tajaajilaa Gaariidha wanna xiqqoo irratti amanamteettaatii wanna baay’ee irrattan si muuda gara gammachuu Gooftaa kee seeni jedheen.
Inni makliitii ( Qarshii) tokko fudhate dhiyaatee yaa Gooftaa ati bakka hin facaasnee kan kan haamtu; bakka hin bittinsinee kan funaantu nama hamaa ta’uu kee nanbeeka waanan si sodaadheefis deemeen makliitii(qarshii) naaf kennite awwaale; egaa makliitiin kee kunooti jedheen.
Gooftaan isaas:- ati tajaajilaa hamaa fi dadhabaadha; Ani bakka hin facaasnee kanan haamu; bakka hin bittinsinee kanan funaanu nama hamaa ta’uu koo ni beektaa? Yoos qarshii koo warra jijjiiraniif kennuu qabda turte anis yeroon dhufu qarshiikoo bu’aa isaa wajjin isaan irraan fudhadha ture jedheen. Sana boodas warreen achi dhaabataniin akkas jedheen:- makliitii (qarshii) kana isa irraa fuudhaatii isa makliitii kudhan qabuuf kennaa! Kan qabu ni kennamaaf kan hin qabne garuu ishiin qabu sun illee irraa fudhatamti; tajaajilaa hamaa kana garuu bakka itti ilkaan walitti riguun jiru gara dukkana ala jiruutti gadi baasaa jedheen.” Mat. 25÷14-30
Hiikaan barumsa kanaa akka armaan gadiitti dhiyaateera. Abbaan qabeenyaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dha. Tajaajiltootni sadan fakkeenyoota kiristaanootaa kennaawwan adda addaa kennameefidha. Kennaawwan kennaman lakkoofsaan garaagarummaa qabaachuun isaanii kennaan tokko isa kaan irraa addaan kan ba’u ta’u isaa agarsiisa.
Amaloota tajaajiltoota jalqabaa lamaan:- Afuurri tajaajiltoota isa jalqabaa fi isa lammaffaa isaan lamaanu hojjatani argachuun akka danda’amu kan amanani, Goftaa isaanitiif amanamoo, rakkoo hojiirra muudatu yaaduudhaan yeroo isaanii kan hin dabarsinee dha. Tajaajilaan lammaffaas akka tajaajilaa tokkooffaa maaliif maallaqa shan naaf hin kennamne jedhee osoo hin komatiin waan kennameen kan hojjate dha.
Isaan lamaanu bu’aa buusaniiru. Isaan lamaanuuf maqaan kabajaa kennamee tokko dha “Tajaajilaa gaarii” kan jedhu, bakkii kabajaa isaan lamaanuu ittiin seenan tokkoo, “Gammachuu Goftaasaanii”. Isaan lamaanu waan muraasaan kan ammamani dha.
Gama keennaatiin yoo ilaalame shanis ta’e lama muraasa dha, garuu namni waan kennameen osoo hin komatiin tajaajiluu qaba. Ilma namaaf kan fayyadu waan kennameef lakkaa’uu osoo hin taane waan kennameen tajaajilu dha. Tajaajiltootni kun tajaajiltoota mana kiristaanaa amantaan fi jaalalaan tajaajilan fakkaatu.
Amala tajaajilaa sadaffaa:- namni kun hojii caalaa rakkolee hojii irratti isa muudatantu isatti mul’ata. Bu’aa busu osoo hin taanee kasaaratu isaaf mul’ata. Tokko kennameef lama taassisuu osoo hin taane isaa harka fudhatamutu issatti mul’ata. Akka hiriyyoota isaa bu’aa buseen Gooftaa isaatiin badhaafamu isaa osoo hin taane adabamu isaatu isaaf mul’ata.
Kanaafu hojjatee bu’aa busuu hin dandenye. Kisii isaallee amanuu dhiisee lafa qotee awwaale. Dimshaashumatti amanuu dhisuutiin nama qabame dha. Fulduura Gooftaasaatti yommu dhiyaatu jechi dubbate wanta tajaajiltootni lamaan dubbatan irraa adda dha, “Nama haamaa akka taate waan bekeef akka na jalaa hin banne jedhee awwaaleera” jedhe.
Barumsi amaloota tajaajiltoota sadan kanarra argamu baay’ee guddaa dha. Waqayyoon kennaawwan adda addaa dhala namaa hundumaaf kennee jira. Kennaan tokko kan kennamu ammoo bu’aa dhala namaatiif. 1Qor. 12÷4-11 kennaan lallabuu kan kennameef jira, kennaan raajii himuu kan kennameef jira, kennaan raajii himame hiiku namni kennameef ammoo jira. Dhimmi ijoo garagarummaa kennichaa osoo hin taanee waan kennameen bu’aa busanii argamuu dha.
Yeroo hunda qulqulluun Daawiit akka faarfatetti ilmni namaa “Gooftaa koo fedha kee gochuudhaaf jaaladhe, seerri kees laphee koo keessa dha, yaa’ii guddaadhaanis tolummaa kee hime” jechu qaba. Far. 39÷8
Daaqoniin akka daaqonummaa isaatti, Lubni akka lubumma isaatti, Phaaphaasiinille akka Phaaphaasummaa isaatti, akkasumas, miseensi mana kiristaanaa hundinuu akka kiristaanummaa isaattii kennaa waqayyoon isaaf laateen bu ‘aa gaarii busee argamuun isarraa egama. Torbeen kun kennaa kenyaa yaadannee bu’aa maal fakkaatu akka busne ittiin gafannu dha.
Kiristaanootni wangeela lallabuudhaaf, namoota mana kiristaanaa keenyaa kessatti adeemsa sirrii hin taanee hordofan sirreesudhaaf saalfannu jirraa. Kun waqayoon birratti kan nu gaafachiisu dha. Kiristaanootni aangoo tajaajiltummaa ummataa qabnee, tajaajiltoota mana kiristaanaa taanee, daldaltootni, qutee bultootni, barsiisootni fi barattootni waan nu kennameen bu’aa busne argamuun nurraa egama. Kana ta’u bannaan akka tajaajila hamaatti adabbi bara baraaf ni saxilamna.
Laallabaan lallabee nama bay’ee motummaa waaqayyoo dhaalchisuu yoo baadhee, Barataan qo’adhee firii gaarii yoo hin galmeessine, qotee bulaan firii facaasee biqilu yoo didee osoo hi jadhiin jabaatee hojjachuun barbaachisaa dha. Ilma namaa irraa wanti barbaachisu hojjachuudha malee firii ykn bu’aa busuun hiree Waaqayyooti. Kanaafu jabannee hojjachuun nurraa eegama.
Kennaa nuuf kennameen hojii bu’aa buusu hojjennee motummaasaa akka dhaallu waaqayyoon nu haa gargaaru. Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-04-09 06:41:362018-10-26 09:21:10Tajaajilaa Gaarii (Mat. 25÷14-30)